10 Matipi Ekurara Pachitima | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Matipi Ekurara Pachitima
Business Travel nechitima, Eco Kufamba Matipi, Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi
3 maawa kana 8 maawa – Rwendo rwechitima ndiyo mamiriro akakwana ekuzorora. Kana iwe kazhinji uchinetseka kurara mumigwagwa, yedu 10 matipi ekurara muchitima anoita kuti iwe urare sekacheche. Kubva kuchitima kufamba zvakakosha kune zvemukati matipi pane yakanakira nzvimbo yezvinotapira zviroto pane chero chitima, isu tiri kutanga rwendo kuenda kune anotapira hope!
Rail senga ndiyo zvakatipoteredza ushamwari nzira yokufamba. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train, The Yakachipa pashiri Chitima Matikiti MuEurope.
1. Matipi Ekurara Pachitima: Uyai negumbeze
Mamiriro ekunze pazvitima anowanzo kuve chili, uye kana uine refu kana husiku chitima rwendo pamberi, gadzirira. Iwe unofanirwa kunzwa wakasununguka zvachose uye zororo rerwendo rwako, uye jira jira rinogona kuva mhinduro kune coziest chitima kufamba kwese.
Kuti udzivise kurara husiku uye kubvunda murwendo rwako kubva kutarisira kana kungoita AC, iwe unofanirwa kugara uchirongedza gumbeze. Pasinei nemwaka kunze, nguva dzose iri pedyo nechando pazvitima. saka, kuunza gumbeze ndechimwe chedu chepamusoro 10 matipi ekurara muchitima. Kukombamira pasi pegumbeze kunokutumira iwe wakananga kurota.
2. Isa Pane Rakareruka Runyorwa Rwokuda Pane Spotify
Nziyo dzinozorodza munzeve dzako dzakafanana nerunodakadza kana imba yemba iri ine ruzha kana kuzara. saka, iwe unofanirwa kugadzirira mashoma playlists paSpotify kuti uve nechokwadi chekuti chinhu chete chaunonzwa mimhanzi. Nenzira iyi unenge wakachengeteka kubva kune chero ngonono kana kutaura kweanenge ari padivi pako.
Zvisikwa zvinonzwika, zororo rinozorora mimhanzi yekutamba, kana mimhanzi kubva kune waunofarira muimbi, vari akanakisa playlist sarudzo kwekurara zvakanaka muchitima. Mimhanzi ndeimwe ye 10 nzira dzakanakisisa dzekurara muchitima, pfupi kana rwendo rurefu.
Amsterdam KuLondon Nechitima
Paris kuenda kuLondon Nechitima
Berlin kuLondon Nechitima
Brussels kuenda kuLondon Nechitima
3. Matipi Ekurara Pachitima: Uya neIye Inflatable Neck Piro
Hapana chinhu chakaipa sekumuka uine mutsipa uye wakaomesa mutsipa. saka, chinhu inflatable mutsipa mutsago chinhu chekufambisa chakakosha kuzvitima. Nenzira iyi, mutsipa wako unotsigirwa, uye uchawana kumuka kubva hope dzinotapira, uchinyemwerera pachiso chako.
zvimwe, uri kuisa panjodzi yekutanga chiitiko chitsva nemitsipa yakaoma, uye hapana nzira yekuyemura nzvimbo nyowani uye kubata akanakisa maonero.
Dusseldorf kuMunich Ine Chitima
Dresden kuMunich Ine Chitima
Nuremberg kuMunich Ine Chitima
Bonn kuMunich Ine Chitima
4. Uyai nemahedhifoni
Kugona, soundproofing mahedhifoni kana mahedhifoni ari pane ese chekuongorora chekufambisa. Mahedhifoni akakosha pakufamba kukuru kwechitima, uye avo Spotify playlists zverwendo rwebhon.
Kana iwe wakakanganwa mahedhifoni ako kumba kana muhotera, kune zvitoro zvakawanda muchiteshi chechitima. Kubva pakati nepakati zviteshi zvezvitima zvakabatikana kune zviteshi zvidiki uye zvisiri-zvakarohwa-nzira, maearphones ndeechimwe chinhu chaunowana chero kupi.
Venice kuBologna Ine Chitima
Florence kuBologna Ine Chitima
Roma kuBologna Ine Chitima
Milan kuBologna Ine Chitima
5. Matipi Ekurara Pachitima: Pfeka Zvakanaka
Akaturikidzana, donje, uye eco-inoshamwaridzika machira mbatya inofanirwa kune vatyairi vechitima. fungidzira 8 maawa muchitima mune juzi inokachidza kana shati yakatetepa, chivimbiso chekurara husiku uye kutemwa nemusoro mangwanani.
Unogona kusanzwa wakasununguka kupfeka pajama muchitima, asi varairidzi uye pullover ndiwo akakodzera zvitima zvipfeko zvekurara. Kupfeka zvakasununguka ndeimwe yepamusoro 10 kurara sei muchitima, uye uve nerwendo rwakanakisisa.
MuFrankfurt kuenda kuBerlin Nechitima
Leipzig kuBerlin Ine Chitima
Hanover kuenda kuBerlin Nechitima
Hamburg kuBerlin Ine Chitima
6. Uyai neMask yekurara
Imwe yekufambisa yakakosha yechokwadi ndiyo yekupedzisira yekurara mask. Dzokera shure, vhara maziso ako uye chengetedza chero mwenje kure ndizvo zvese zvaunoda kuti uve nehope dzakanaka. Chinhu chinozivikanwa chekuti kana iwe uchida kurara zvakanaka usiku, unofanira kubvisa chero zvinotsamwisa, uye bvisa pachako kubva kune chero rudzi rwechiedza.
Kana usiri kufamba mune imwe kabhini yakavanzika, uye haizove nesimba pamusoro pemwenje wechiedza, iva nechokwadi chekurongedza mask ekurara. ndokubva, hauzove nechinhu chekushushikana nacho kana mufambi ari padivi pako afunga kuverenga husiku hwese kana kana mwenje wechitima wakanyanya kupenya.
7. Matipi Ekurara Pachitima: Chengetedza Zvinhu Zvako Zvakachengeteka
Chikwama chidiki kana bhegi pamusoro pemapfudzi ako uye pasi pezvikamu ndiyo nzira yakanakisa yekuchengetedza zvinhu zvako zvakachengeteka. Ita shuwa kuti pane nzvimbo yakakwana yepasipoti yako, chikwama, nhare, uye chero zvimwe zvigadzirwa zvauri kuronga kuuya nazvo.
Nenzira iyi iwe uchave unokwanisa kuve wakanaka uye kunetsekana-isina chitima rwendo, pane kurara uine ziso rimwe rakavhurika.
8. Bhuka Nzvimbo Panzvimbo Pakati Pakati Pengoro
Nzvimbo yakanakisa yezviroto zvinotapira iri pakati pengoro. Chikonzero cheichi ndechekuti yepakati iri kure zvakakwana kubva kune chero mukova, kana paine zvimbomira munzira. Pamusoro pe, unenge wakachengeteka uye unonzwika kure nekugezera uye chero hwema.
zvisinei, kana iwe uri kufamba neanorara chitima, zvingangoita haungasangana nedambudziko. Izvi zvinokonzerwa nenyaya, kuti vakarara zvitima ari A-B zvitima, pasina kumira munzira, uye saka, hapana zvinokanganisa.
Milan kuRoma Ine Chitima
Florence kuenda kuRoma Nechitima
Pisa kuRoma Nechitima
Naples kuenda kuRoma Ine Chitima
9. Isa Foni Yako Kure
Mazuva ano nyika yese iri pafoni yako. ne zvisingaperi maapplication nemitambo, chinetso chikuru ndechekubuda kunze uye kuisa foni yako kure. Izvi zvinonyanya kuoma kana iwe uri parwendo rurefu-kure, muchitima, ndisina kwekuenda.
zvisinei, rimwe remazano edu epamusoro ekurara muchitima kuisa foni yako muhomwe, kana kunyangwe munzira yekubhururuka.
Milan kuNaples Ine Chitima
Florence kuNaples Nechitima
Venice kuNaples Ine Chitima
Pisa kuNaples Nechitima
10. Matipi Ekurara Pachitima: Uya Nezvokuverenga
Hapana chinhu chinoisa pfungwa kureruka kupfuura nyaya yakanaka, uye ndizvo chaizvo zvaunoda kuti uve nehope huru muchitima. Kuunza magazini ako aunofarira, kana bhuku pane chitima rwendo ndeimwe yemazano akanakisa ekurara muchitima.
Paunenge uchiverenga pfungwa dzako dzinoenda kune imwe nzvimbo, marongero, uye kunetseka kwezuva rese kunopera. Kuverenga kukuru kwakanaka kurovedza muviri, kubvisa pfungwa dzako pane chero ruzivo rwechokwadi. Kweawa kana maviri, unokukurwa, uye izvo zvakakwana kukuita iwe kurara uye kurota kure.
Amsterdam kuBruges Nechitima
Brussels kuenda kuBruges Ine Chitima
Antwerp kune Bruges Ine Chitima
Ghent kune Bruges Ine Chitima
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga chisingakanganwiki chitima rwendo, nezvigaro zvakanakisa uye nemitengo yakanakisa yekurara kwakanaka kwechitima.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "Matipi gumi Ekurara Pachitima" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-how-sleep-on-train%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, iwe unowana edu anozivikanwa nzira dzechitima - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura iyo / ja ku / es kana / de uye mimwe mitauro.
BestTipsSleeponTrain hope akarara KuraraTrainsEurope YaneSit Train Travel chitima kufamba Mazano
How To Travel Zvakachengeteka Panguva The Coronavirus Zvawanikwa
Chitima Kufamba, Travel Europe
The Most Scenic Dzidzisai Trips In Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Norway, Chitima Kufamba Scotland, Travel Europe
3 Day Best Trips From muBudapest By Train
Rovedza Kufamba Austria, Train Travel Czech Republic, Chitima Kufamba Hungary, Travel Europe